Review Bose QC35 Wireless Sameecadaha - Rule News
Review Bose QC35 Wireless Sameecadaha
QC35s Bose ma kaamil ah. La'aanta badhamada U gudub track quduuska iyo isticmaalka saldhigba 2.5mm halkii 3.5mm heerka warshadaha ee waa diiqayo.
The headphones cusub Bluetooth ka Bose dibadda looga xidhay dunida buuq idinku wareegsan oo maskaxdaada ka buuxin music macaan, oo aan baahida loo qabo in fiilooyin
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Bose QC35 headphones wireless: buuq fudud mushkilado kansali” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Tuesday 21 June 2016 06.00 UTC
headphones Bose ayaa lagu qabtay sida caadiga ah dahab qaylada firfircoon kansali iyo dalban premium a, waxaa ka. Laakiin awood model cusub shirkada Mareykanka ee QC35, headphones ugu horeysay qayladii-kansali Bluetooth, ku nool yihiin ilaa laga filayo?
image muraayad ee QC25 ah
headphones The laab ilaa safarka ama guri for habboona in kiis. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
QC35s ayaa asal ahaan yihiin labo ka mid ah QC25s la Bluetooth iyaga oo ku, oo ka baxsan waa ay adag tahay in labada sheegi marka laga reebo haddii aad ogtahay waxa aad raadineyso weeyna: ay tahay midabka wax yar oo kala duwan - heli karo bannaanka madow ama lacag halkii midabada laba midab - iyo koob sax ah waxay leedahay saddex badhamada gacanta, LED ah iyo booska microUSB a.
The koob dhegta bidix leedahay dekedda 2.5mm headphones, taas oo macnaheedu yahay in ay la isticmaali karaa sida headphones banki leh ama aan lahayn buuq kansali on, laakiin waxaad u baahan doontaa in aad isticmaasho cable ka mid ahaa ama ka iibsan 3.5mm ah si 2.5mm adabtarada.
QC35s The dareemaan solidly dhisay. The guutooyin hagaajin dareemaan raagaya, sida beddelay calalkiisii ​​madaxa ugu sareeya, daboolay pleather la suuf jilicsan adhidibadeedka-sida ka dhanka ah madaxa. koob dhegta waxaa hagaajiyeen la pads jilicsan-pleather halka gudaha la contoured sidaa daraadeed waxa uu ku fadhiyaa off dhegta.
Waxay qaar ka mid ah headphones ugu raaxo leh oo fiican-ka-xiran waxaan ku farxay in ay saaray. Waxay miisaankoodu 310g, laakiin ma dareemaan aad u culus, joogo madaxa kuu saaran fudayd hana ku dhaqdhaqaaqi marka aad ku socotaan, halka aan gelinaya cadaadis aan loo baahnayn on kasta oo ka mid ah kaalinta madaxa kuu saaran. The gebi encapsulate dhegihiinna oo aan ku saabsan, laakiin waa yara is haysta iyo khiyaano, waayo, headphones weyn-the-dhegta.
Waxay sidoo kale isku laab kor gaadiidka, la koobabka laabi Wabka guri la calalkiina in ay ku habboon ay dhacdo in xad is haysta. Iyagu ma ay tahay u yar marka duubnaadaan, laakiin yar ku filan oo ay ugama dhigin kuwaas culaab bac rakaabka ah ee.
Kontoroolha iyo isku xirnaanta
The koob dhegta midigta ka sameeya wax walba oo, la badhamada gacanta, awood ku biiro, microUSB godka iyo kaalinta NFC. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The koob dhegta midigta waa halka tallaabo oo dhan dhacaya. Waxay leedahay labo ka mid ah badhamada mugga Hallo hakin button a / play. Ma jiraan wax badhamada U gudub track quduuska, taas oo wax yar ka niyad jab, laakiin double ama xaafuun riixaya badhanka Play ah kalsoonaan karo weeraryahanka ama u socdeen sababi.
The koob dhegta midigta sidoo kale waxa uu ku biiro awoodda, taas oo uu nalku in meel saddexaadna wuxuu u soo saaray headphones galay hab garab, haddii aad u baahan tahay, oo aad u sameeyaa iPhone ah. Inta badan dadka isticmaala Android si fudud u yeelan doonaan in ay ka jaftaa casriga ah ay isla goobta ku NFC - mar on koobka dhegtiisa midig si ay u xubnuhu via Bluetooth.
xiriir Bluetooth The labada casriga ah iyo PC a ahaa ayaa dhagaxayga weyn adag in xaaladaha oo dhan, ii oggolaanaya in ay la yaabi agagaarka qolka aan laga badinin la xidhiidha oo soo baxay dariiqyada la phone ee aan jeebka aan arrinta.
Sida ugu headphones Bluetooth QC35s ku xiri doona laba qalabka isku mar, noqon doona headset ah phone a iyo dhaqaajiso karaa Google Haddaba ama Siri on smartphone a. tayada Call dhex headset ahaa wanaagsan sidoo kale.
Sawaxanka kansali iyo go'doomin
The koob dhegta bidix leedahay dekedda headphones 2.5mm isticmaalka 2.5mm alaabta si cable 3.5mm dhaqanka. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Waxa ugu fiican ee ay ilaa iyo haatan ku saabsan QC35s waa in iyaga oo gashanno hubka dareensan ilxidh ka aamusay sida ayaa wafted idiin taliya, ka saareen hubbub asalka, haddii dariiqyada, on tareenka ama xafiiska.
technology Bose ee buuqa kansali, oo kormeera dhawaaqyada soo socda iyadoo la isticmaalayo mikroofanada ay u di'iyaa kuwa la ruxruxo dhawaaqa bedelka isticmaalaya ku hadla si aad u joojiso ka baxay dhawaaq ka hor ku dhufatey aad durbaanka dhegta, ayaa la sheegay in ugu fiican ganacsiga. Waa arrin aad u waxtar leh, inkastoo muran ma hor horyaal ee ugu fiican ee inta kale. Waa maxay miles khayr badan inta wax headphones kale buuq-kansali Waxaan isku dayay waa ku furid ah dadban Buuq.
Bose hayaa koob dhegtuna qalabka dhawaaqa dhuuqin, taas oo, weheliso technology qaylada kansali firfircoon, shaqeeya cajiib ah ku ool ah, xanibeen lama filaan ah, fiiqan codadka qaylada, in kansal garaynta halganka la.
Ma jiraan wax headphones fiican la heli karo xilligan waayo, xoog sheer ee aad la takooro ka dunida ka baxsan, wireless ama haddii kale, ka QC25s la'aantiis.
koob dhegta waa raaxo iyo siiyaan go'doomin fiican dunida ka baxsan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Beauty of go'doomin in aad u fiican yahay in music runtii gabyi kartaa mugga kasta. Waxaan arkay aniga oo si joogto ah la dhageysto my music at muda badan hoose, taas oo waa wax wanaagsan u socdeyba weyn ee maqalka.
headphones The dhawaajiyaan weyn. Dadka qaar ma jecla jidka waxyaabaha Bose dhawaajiyaan - hubaal waxaa jira a "Bose dhawaaqa" - laakiin waxa ay leeyihiin dheelitirka weyn, Bass wanaagsan marka loo baahan yahay iyo kala weyn u dhexeeya dhawaaqyada iyo alaabtii. Iyagu ma ay ka dhawaajiyaan sida wanaagsan sida set oo ah fasalka audiophile £ 300 headphones banki, laakiin dadka intooda badan iyaga u jeclaan doonaa.
Waxay dhab ahaan ma yihiin labo ka mid ah Beats, laakiin soo saari kartaa Bass runtii arrin qoto dheer haddii riixay. Waxa ugu cajiib ah waa in la kansali qayladii firfircoon wax saameyn ah kuma tayada maqal ah,ka duwan on headphones kale oo badan oo la mid ah.
Iyadoo Bluetooth on QC35s ku outlast doonaa xitaa ugu dheer ee u socdaalay diyaarad. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
QC35s The kor ku noolaa in filayo hoos ku xeeran 5% halkii saac oo la dhageysto badan Bluetooth waarta qiyaastii 20 saacadaha u dhexeeya eedeeyay marka uu dhagaysto badan Bluetooth, oo dheer haddii koobna xiriir banki. Waxaa jira headphones sanqadh-kansali badan oo aan loo dabayn wireless in socon ilaa iyo inta Bose u dhexeeya eedeeyay.
Waxa kale oo jira ah auto-heegan caawiya dheerayn nolosha batteriga iyo waxa keeni kara ka dib markii yar sida shan daqiiqo ama kicida iyo inta uu saddex saacadood, ama demiyo si buuxda. Si aad hurdada ka heegan kaliya ay tahay in aad riixdo mid ka mid ah badhannada.
headphones waxay sii wadi kartaa in la isticmaalo marka awood u egyahay iyadoo la isticmaalayo cable ka mid ahaa, laakiinse iyagu ma ay ka dhawaajiyaan arrin sida wanaagsan. Waxay qaadan in ka badan laba saacadood si buuxda ka qaadaan via microUSB.
The headphones godka 2.5mm waa diiqayo - waxay ka dhigan tahay oo keliya ma aad furaysto kartaa wax headphones jir cable ee
A biiro awood quduuska waa si uga wanaagsan inay qaban button awood u 5 seconds si ay u beddelaan ama off
headphones ayaa la hadlayaa kuwiinnan oo ku dhawaaqay boqolkiiba batteriga iyo qalabka la xiriira on kor u bilaabaan iyo markii qalabka xiro ama barkinta isticmaalaya qoraal ay codkooda
The cod Ingiriisi dumar jirtey dhawaajiyaan yar shukaansaday, iyadoo xoogaa koror ah dhamaadka lambarada ama xarfaha, taas oo ku dhawaad ​​u muuqataa sidii ay sheegay in la il jabin ah oo dhoola
codka waxa uu ka dhigayaa qaar ka mid ah doorashooyin cajiib ah - lifaaqaaya OnePlus ah 3 smartphone lagu dhawaaqay sida a O-N-E daray saddex
Waxaa jira ah Android/macruufka app in kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan qalabka aaday, xidhaysa Dardar codka, beddelo magaca headphones iyo maarayn saacad auto-heegan ah
Bose QC35 The lacag £ 290, taas oo ka dhigaysa 40 £ badan QC25 ah banki, £ 160 ka badan SHB9850NCs Philips, £ 100 ka badan Plantronics BackBeat Pro, £ 70 ka badan Sony h.ear on Wireless NC headphones, laakiin £ 9 ka raqiisan yahay ee baqbaqaaq Zik 2.0 headphones oo £ 90 jaban badan Sennheiser Wireless-wadeenada.
Laakiin kuwa jug yar yihiin ilaa hadda dagan yihiin sanqadh fantastic ah la kansali iyo go'doomin, raaxada iyo codka fiican. Waxay qaali headphones non-fashion tahay, oo mana ay ka dhigo mid aad eegto sida Dr Dre, laakiin ay tahay qiimihiisu beesadda kasta haddii aad keyga gaadiidka dadweynaha, dhibtoon in ay xooga saarto in xafiis qorshe furan, duuli meel ama aad doonayso waxoogaa nabad iyo shanqar la'aan in aad noloshaada.
QC35s Bose waa sanqadh ugu fiican kansali lacag headphones hadda ka iibsan kartaa, oo muran ka headphones fiican Bluetooth aad. Waxay cajiib tahay. Waa maxay sababta aan u lahaa in ay sugaan dheer iyaga u, Waxaan wax fikrad ah.
Iidooyinka: ugu fiican-in-fasalka qaylada kansali iyo go'doomin, nolosha batteriga weyn, codka weyn, raaxo, laab gaadiidka, Bluetooth, NFC, app maamulka hufan
Arrrimaha: 2.5mm headphones dekedda, ma track heegan u boodboodaan kontaroolada
Taabo calaamadda NFC la telefoonka for garab deg dega ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
baqbaqaaq Zik 2.0 dib u eegis: headphones wireless loogu talagalay by Philippe Starck
Lix ka mid ah headphones sanqadh-kansali fiican ka 2014 aamusiiyey dhimo ah
Shan ka mid ah headphones fiican Bluetooth ka 2015 in ay jebiyaan oo lacag la'aan ah fiilooyinka
Qodobka, music Digital oo maqal ah, Qalab, sameecadaha, Dib u eegida, Samuel Gibbs, Technology, UK Technology
← Kansarka Naasaha Growth Cell hakiyey by Osteoporosis Drug $4 Indian casriga 'markab doonaa Week this’ →